၁၅ စက္ကန့်စာ MTV အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Nicki Minaj နဲ့ Ariana Grande
On June 15, 2018 By Angel
Hollywood ကအဆိုတော်တွေကြားမှာသာမက နိုင်ငံတကာမှာ လူကြိုက်များအောင်မြင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးအဆိုတော် Nicki Minaj နဲ့ Ariana Grande တို့ဟာ ၂ယောက်ပေါင်းပြီး BED ဆိုတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို collaboration လုပ်လိုက်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကဘဲ သူတို့ရဲ့ official အကောင့်တွေကနေ teaser video တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး သီချင်းကိုတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေကနေ ဝယ်ယူနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Teaser video မှာတော့ အလန်းစားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ရေကူးကန်နဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ ရိုက်ကူးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
You know the love is real when u send ARIANA fkng GRANDE an UNRETOUCHED #Bed snippet & she gives you the green ?to post it. Ugh!!!!! @grizzleearts thank you pooh bear!!! #Bed is out now!!!! #Queen PRE-ORDER is out NOW!!!! @arianagrande is out now!!!! Fukkkkkkkkkkk agdgbnkssgxeokjgdewsgk
Nicki နဲ့ Ariana တို့ဟာ သီဆိုပုံသီချင်းအမျိုးအစားချင်း မတူညီကြပေမယ့် ဒီ BED မှာတော့ Nicki Minaj က သူရဲ့ပုံစံအတိုင်း Rap အပိုင်းကနေပါဝင်ထားပြီး Ariana ကတော့ Featuring ကနေပါဝင်သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ သီချင်းအမျိုးအစားနဲ့ မတူညီတဲ့ အဆိုတော် ၂ဦး ပေါင်းစပ်ပြီး သီဆိုထားတဲ့သီချင်မို့ Ariana fan တွေကိုနဲ့ Nicki ရဲ့ fan တွေကို နားထောင်ကြည့်ပေးပို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
i love you so fucking much til the end of time @nickiminaj ‘Bed’ is out now and you’re gettingavideo too bye ☁️ ♡ ? pic.twitter.com/yvzEHAekSm
Music NewsHip-Hop / RapPop
PREVIOUS POST Previous post: စေ့စပ်လိုက်တဲ့ Ariana Garande နဲ့ Pete Davidson
NEXT POST Next post: AGT စင်မြင့်ထက်မှာ ဒိုင်တွေကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ် ချာတိတ်မလေး